दिव्याको मृत्युको नयाँ खुलासा ! कोरोनाले होइन उनको मृत्यु श्रीमानको कारणले : देवोलिनाले रुँदै यसरी बताइन् रहस्य (भिडियो हेर्नुस्) – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Video/दिव्याको मृत्युको नयाँ खुलासा ! कोरोनाले होइन उनको मृत्यु श्रीमानको कारणले : देवोलिनाले रुँदै यसरी बताइन् रहस्य (भिडियो हेर्नुस्)
एजेन्सी । अभिनेत्री दिव्या भटनागरको मृत्यु पछि उनको निकै मिल्ने साथीले नयाँ कुराको खुलासा गरेकी छन् । दिव्या ५ वर्ष लामो प्रेम सम्बन्ध पछि गत वर्ष मात्र विवाह बन्धनमा बाँधिएकी थिइन् । विवाहको वर्षगाँठ आउन १५ दिन बाँकी छंदै दिब्याको निधन भयो ।
उनको निधनले उनका सहकर्मीहरु गम्भीर शोकमा परेका छन्। विशेषगरी देवोलीना भट्टाचार्जी उनको निकै मिल्ने साथी हुन् । उनीहरुले टेलिसिरियलमा लामो समय संगै काम गरे । दोवालीनाले दिव्यालाई आफ्नै कारमा अस्पताल लिएर गएकी थिइन्।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
दिव्याको निधनपछि उनी यति दुखित भइन् कि सामाजिक संजालमा पोस्ट गर्न भिडियो बनाउँदासमेत उनको आँशु रोकिएका छैनन् । देवोलीनाका अनुसार दिव्याको मृत्यु केवल कोरोनाबाट भएको होइन, उनको मृत्यु श्रीमान गगन गबरु कारण भएको हो । लामो प्रेममा रहँदा पनि उनका प्रेमीले उनलाई मानसिक पी डा दिन्थे । विवाह पछि यो प्रकृया थप बढेको छ ।
सात मिनेटको भिडियोमा देवोलीनाले भनेकी छन्, ‘म आज सबैभन्दा नजिकको साथी दिव्या भटनागरका लागि यो भिडियो बनाइरहेकी छु, जसले मलाइ छोडेर गइन्। यी १० वर्षमा मैले उनले कसैको पनि चित्त दुखाएको मैले देखेको छैन। तर मानिसले उनको चित्त दुखाए अनि प्रयोग पनि गरे। दिव्या सोझी थिइन् र म भन्दा हजार गुणा धेरै भावुक पनि।
भिडियोमा देवोलीनाले मृत्यु हुनु भन्दा पहिला श्रीमान गगन गबरी विरुद्ध ओशिवारा प्रहरी चौकीमा उजुरी दिएकी थिइन्। करवा चौथको दिन पनि गगनले दिव्यालाई हातपात गरेको खुलासा गरेकी छन् ।